တရုတ်ပိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ကျွန်းအနီးဖြတ်သွားတဲ့ ဗြိတိန်စစ်သင်္ဘောကြောင့် တရုတ်က ဗြိတိန်ကို သတိပေ? - Yangon Media Group
တရုတ်ပိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ကျွန်းအနီးဖြတ်သွားတဲ့ ဗြိတိန်စစ်သင်္ဘောကြောင့် တရုတ်က ဗြိတိန်ကို သတိပေ?
တရုတ်က သူ့အပိုင်လို့ပြောထားတဲ့ တောင်တရုတ်ပင်လယ်က ကျွန်းအနီး ဖြတ်သွားတဲ့ ဗြိတိန်တော်ဝင်စစ်သင်္ဘောကြောင့် တရုတ်နဲ့ဗြိတိန်တို့ရဲ့ ဆက်ဆံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ တရုတ်က အခုလ(၇)ရက်နေ့မှာ သတိပေးလိုက်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က (Paracel) ပါရာစဲလ်ကျွန်းအနီးကနေ တန်ချိန် (၂သောင်း၂ထောင်)ရှိတဲ့ (HMS Albion) HMS အယ်လ်ဘီယွန်စစ်သင်္ဘောက ဖြတ်သန်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကျွန်းကို တရုတ်ကသူ့အပိုင်လို့ပြောနေပေမယ့် ဗီယက်နမ်နဲ့ တရုတ်(တိုင်ပေ)တို့ကလည်း သူတို့အပိုင်လို့ပြောနေပါတယ်။
ဟောင်ကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဗြိတိန်ရဲ့ ခြောက်လပတ်အစီရင်ခံစာမှာ ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဂျရယ်မီဟန့် (Jeremy Hunt) က ဟောင်ကောင်မှာ လွတ်လပ်ရေးဆွေးနွေးပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး လွတ်လပ်စွာပြောခွင့်မရှိဘူးလို့ ထုတ်ပြန်ခဲ့တာကြောင့် တင်းမာမှုတွေပိုပြီး မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဟောင်ကောင်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးဆိုတာ လက်တွေ့ကျတာလား၊ ရွေးချယ်စရာအခွင့်အလမ်းလားဆိုတာ ဗြိတိန်အနေနဲ့မစဉ်းစားခဲ့ဘူးလို့ ဂျရယ်မီကပြောပါတယ်။
ဂျရယ်မီ ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ အစီရင်ခံစာဟာ လက်မခံနိုင်စရာနဲ့ ရယ်စရာသာဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာ ဟောင်ကောင်ဟာ တရုတ်ကိုပြန်အပ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ဒါဟာတရုတ်ရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရသူ ဟွာချွန်ယင်း (Hua Chumying) က ပြောကြောင်း ရိုက်တာသတင်းအရသိရပါတယ်။
ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရန် ဘုံရည်မှန်းချက်နှင့်ဘုံစံနှုန်းများ ညှိနှိုင်းရယူရန်လိုအပ်
မာရာဒိုနာကို မက္ကဆီကို ဒုတိယတန်းကလပ်က နည်းပြသစ်အဖြစ် ခန့်အပ်
‘အခုခေတ် လူငယ်တွေက ကိုယ်ပြချင်တဲ့ ပြကွက်ကို ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ် သတ္တိရှိရှိပြတယ်။ ရိုက်ရဲ??
ARSA ရန်ကာကွယ်ပေးနေသည့် နယ်ခြားစောင့် ရဲကင်းစခန်းများကို ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့် AA ၏လုပ်ရပ
၁၉၆ဝ ပြည်လွန်နှစ်မှ နာမည်ကျော် မင်းသမီးတစ်ဦး အဖြစ် ခရစ္စတင်း စတီးဝပ် သရုပ်ဆောင်မည်
အမေရိကန်တွင် အာကာသ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံး စတင်မည်